Xog: Suluxii Madaxwaynaha iyo ONLF – Rasaasa News
Xog: Suluxii Madaxwaynaha iyo ONLF
Waxaa maalmahan warbaahinta Degaanka (Ogaden) qoraysay warar is khilaafsan oo ku saabsan socdaalka mudane Madaxwaynaha Cabdi Maxamuud Cumar.
Qaar waxay qoreen in madaxwaynaha iyo Raysal Wasaare xigeenka Atoobiya Xasan ay isla socdeen ujeedaduna ahayd in ay Ingiriiska iyo barwaaqo sooranka Yurub kala xaajoodaan deeqo la hakiyey. Warkaas waa war dabo go,an.
Arimaha diblomaasiyada Atoobiya waxaa ka hadli kara oo kaliya federaalka. Hadii uu jiro tuhun ku saabsan hal mar bay wada yimaadeen, waa run oo hal diyaarad bay wada saaraayeen. Laakiin ma jirto ujeedo ku wada socdeen oo aa ka ahayn diyaarada la wada saaraa.
Demeke Mokenen Xasan, Bradford University ayuu bisha December 5, 2013 ka qaatay shahaadada qalin jabinta Doctorate. Waxaan uu London u tagay arintaas iyo in uu mar labaad iska qor qayb waxbarasho oo kale isla jaamacada. Bradford University, ayaa siisa waxbarasho online qaar badan oo ka mid ah masuuliyiinta Federalka Atoobiya iyo saraakiisha ciidamada.
Madaxwayne Cabdi iyo waftigiisu waxay u yimaadeen sidii hanti lacageed loogu heli lahaa biyo xidheenka Abaay iyo hawlo xuuraan iyo xidhiidh lala sameeyo xubnaha ONLF ee London. Waxaa ka qayb qaadan doona ururuinta hantida biyo xidheenka Abaay wasiirka beeraha, oo la filayo in uu wax ku kordhin karo.
Bishan Jan 13, waxaan qoray in uu jiray xidhiidh khadka telefoonka ah uu dhexmaray madaxwaynaha iyo gobonimo doonka, arinkaasi waa run. Waxayna u dhacday sidan; Telefoonka gacanta ee Maxamed Cumar, ayaa waxaa garaacay gudoomiyihii hore Jaaliyada Ogaden oo ay xiligaas hoteelka wada joogaan madaxwaynaha.
Maxaad sheegtay iyo maxaad sheegtay baa dhexmartay, kolkaas ayuu gudoomiyihii hore ku yidhin ninkan Adeer sallaan. Wadahadal gaaban waxaa Telefoonka gooyey Maxamed Cumar Cismaan. Arintaasi waa xaqiiq!
Gudoomiyihii hore ee Jaaliyada Ogaden oo magaca na soo gaadhay lagu soo gaabiyey Xuseen, ayaa isagu haatan ah dadka nabada qaatay. Dhawr goor oo hore ayuu gudoomiyuhu xidhiidh ula sameeyey masuuliyiinta Jabhada, maadaama ay wada shaqayn jireen, kulankii ugu dambeeyeyna waxaa uu ka dhacay caasimada labaad ee Ingriiska.
Warar hoose ayaa tibaaxaya in qaar ka mid ah taageerayaasha ONLF, ay ka cadhoodeen hadalka la sheegay in uu dhex maray Maxamed Cumar Cismaan iyo Cabdi Maxamed Cumar. Kuwaas oo sida la sheegay qaarkood ay la xidhiidheen Madaxwaynaha, kuwa kalena la filayo in ay la xidhiidhaan.
Aw Jaamac Cumar Ciise: Muftigii Taariikhda iyo Maansada Soomaalida u Miciinay/W. Q. Ibrahim M. Deeq
Cakaara, “Taageerayaal ka soo goostay ONLF”